Ezubere iji gosipụta ihe si na Nkịtị | Martech Zone
Ezubere iji gosipụta ihe si na Nkịtị
Tuesday, April 13, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
Kidsmụaka m na-achị m ọchị mgbe niile maka ịhụnanya m nwere n'ihe nkiri sịnịma - enweghị m ike ịza ha. Ka m na-ele Madagascar 2, ahụrụ m ebe a n'anya ebe ọkụ na-acha uhie uhie na-amalite na-enwu ma na-apụ ...… lee anya na penguins na-agbazi ya:
Ọ dị oke njọ na nchịkọta adịghị enwe ọkụ na-acha uhie uhie na-enwu gbaa mgbe niile “emepụtara iji gosipụta ihe pụrụ iche” yana akwụkwọ ntuziaka maka otu esi edozi ha. N'ezie - ọbụlagodi na ha mere - ọ bụrụhaala na ụgbọ elu ahụ na-efe, ha nwere ike họrọ ịme ihe ọ bụla.
Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu na-emetụta nzukọ dị iche iche (dịka m!). Nsogbu bụ na e nwere Elezie akụkọ n'ime nọmba na kwesịrị na-egbu maramara bulbs. Ọ bụ ọrụ gị dị ka onye Marketer ịchọta ha… ma eleghị anya nnukwu ọdịda dị n'okporo ụzọ isiokwu, ma ọ bụ saịtị na-ezo aka na-apụta site na enweghị ebe.
Kacha nso anyị ga-esi a ntuziaka bụ na-aga n'ihu ndụmọdụ nke folks dị ka Avinash kaushik na omume kacha mma blọọgụ. Kedu ụdị ọkụ ọkụ ị kpuchitere (ma ọ bụ ileghara anya) na nchịkọta gị?
Ikekwe, i kwesịrị ime ihe banyere ya tupu ụgbọelu agbada! Ma ọ bụ ị na-ahụ na akụkọ nchịkọta akụkọ gị “mara mma ma yụtụ hypnotic”?
Tags: AnalyticsMadagascarbọtịnụ uhie
Douglas Karr Tuesday, April 13, 2010 Saturday, June 27, 2015
Kedu ihe kpatara na otu esi edebanye aha ma nweta nọmba DUNS
Ichefu Blackberry arụpụtaghị, Multi-Tasking Enwee Mmeri